Sidii aanu hore idiinku soo gudbinay muuqaal uu wargayska L’Équipe ku shaaciyay in December 3 la qaban doono xaflada abaal marinta Ballon d’Or 2018 ayaa laga fahmay xidiga ku guulaystay abaal marintan inkasta oo ayna wali ahayn arin rasmi ah oo lagu dhawaaqay.
Qaabkii uu wargayska L’Équipe u soo kala horaysiiyay ciyaartoyda ayaa keentay in khubarada kubbada cagtu ay ka fahmeen in da’yarka xulka qaranka France iyo kooxda PSG ee Kylian Mbappe uu ku guulaystay abaal marinta Ballon d’Or inkasta oo ay noqon karto arin aan u dhicin sida la fahmay.
Laakiin dadka kubbada cagta saadaaliya ayaa muujiyay in wargayska L’Équipe uu muuqaalkan ku sii bixiyay qish wayn oo la xidhiidha saddexda xidig ee kaalmaha hore gali doona waxayna u kala horeeyaan Mbappe, Varane iyo Modric oo kaalinta saddexaad ah.
Laakiin haddii aynu ka soo qaadno in qaabka muuqaalka L’Équipe uu sax yahay oo uu Kylian Mbappe ku guulaysto abaal marinta France Football ee Ballon d’Or maxaa dhici kara? Miyay abaal marintani lumin doontaa sumcadii ay caalamka ku lahayd?.
Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa falanqayn aanu ku samaynay waxyaabaha ku xeeran abaal marinta Ballon d’Or iyo waliba saamaynta ay yeelan doonto haddii Messi ama Ronaldo midkood aanu ku guulaysan.
Ugu horayn abaal marinta Ballon d’Or waa mid soo jirtay tan iyo sanadkii 1956 kii waana abaal marin sumcad wayn ku leh kubbada cagta caalamka oo uu ciyaartoy kastaaba ku riyoodo in uu maalin uun ku guulaysto laakiin sida ay hadda u muuqato waxaa dhici karta in ay wax badan sumcadeeda lumin karto.
Dad waynaha kubbada cagta aduunku waxay si buuxda u aaminsan yihiin in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay wali yihiin labada xidig ee ayna cidina gaadhin isla markaana xidig kasta oo ku guulaysta abaal marinta Ballon d’Or aanu ahayn mid uga qalma Ronaldo iyo Messi.
Aragtidan dad waynuhu waxay keenaysaa in ciyaartoy kale oo ku guulaysta abaal marinta Ballon d’Or ay bilaa xiiso u noqon doonto sidii abaal marintii The Best ee ay FIFA ku bixisay magaalada London. Markii uu Modric ku guulaystay abaal marinta The Best, halkii isaga laga hadal hayn lahaa waxaa saxaafada qabsaday maqnaanshihii Messi iyo Ronaldo ee xafladii London.
Xataa madaxda FIFA ayaa u adkaysan kari waayay sumcad xumadii ka soo gaadhay in Ronaldo iyo Messi ayna ka soo xaadirin xafladii London ee abaal marinaha FIFA waxayna taasi muujinaysaa in abaal marintaas ay martay meel aan u qalmin marka la miisaamo aragtida guud ee kubbada cagta caalamka.
Haddii maqnaanshihii Ronaldo iyo Messi ee xafladii abaal marinaha FIFA uu qariyay in Modric uu abaal marintan ku guulaystay, maxaa laga filan karaa in Ballon d’Or ay ku guulaystaan ciyaartoy la mid ah Mbappe, Varane ama Modric?.
Xaqiiqda marka laga hadlayo ee xisaabta lagu darsado micnaha ay u taagan tahay abaal marinta Ballon d’Or ma jiro xidig Ronaldo iyo Messi uga qalma abaal marintan waxaana ugu soo dhaw Mohamed Salah waana marka la tixgaliyo in abaal marinta Ballon d’Or ay tahay abaal marin shaqsi ah.
Ma jirto sabab ciyaartoyda France ee koobka aduunka ku soo guulaystay ay uga fiican yihiin ciyaartoydii Spain ee koobka aduunka iyo waliba koobab kale ku soo guulaystay ee sida Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Iker Casillas kuwaas oo iyaga oo arkaya ay abaal marintan rag kale ku guulaysteen.
Sidaa daraadeed, Modric oo aan koob aduun ku soo guulaysan ugama qalmo abaal marinta Ballon d’Or Ronaldo oo koobka Champions league ee uu Modric haysto ka soo dhaliyay 15 gool, waxaana la mid ah Lionel Messi shaqsi ahaan ah xidiga xog ahaan abaal marintan ugu qalmi lahaa.
Dad badan ayaa aaminsan in sida ay hadda u socoto aanay Messi iyo Ronaldo midkoodna ku guulaysan doonin abaal marintan Ballon d’Or waxaana loo arkaa mid sumcadeeda lumin doonta maadaama oo xataa ayna abaal marintan u tartamayn xidighii Messi iyo Ronaldo ku soo xigay ee sida Neymar, Hazard iyo Mohamed Salah.
Halkan hoose ee 2-aad ilaa 5-aad kaga bogo shanta ciyaartoy ee u qalma abaal marinta Ballon d’or.
Haddaba Waa Kuwee Shanta Ciyaartoy Ee Sida Dhab Ah Ugu Qalma Ku Guulaysiga Abaal Marinta Ballon d’Or:
5- Mohamed Salah : Mohamed Salah waxa uu 12 kii bilood ee ugu danbeeyay ee lagu qiimaynayo abaal marinta Ballon d’Or uu soo qaatay waqtigiisii ugu fiicnaa waayihiisa ciyaareed oo dhan isaga oo dhaaman abaal marinihii ugu muhiimsanaa ee Premier league iyo qaarada Afrika ku hantay wax qabadkii layaabka lahaa ee uu Liverpool iyo xulkiisa u soo sameeyay.
Mohamed Salah ayaa 44 gool u soo dhaliyay kooxdiisa Liverpool wuxuuna soo gaadhsiiyay finalkii UEFA Champions League balse waxa uu sidoo kale awooday in 28 sanadood kadib uu xulkiisa Masar u soo saaray koobka aduuka isaga oo waliba ahaa halbawlihii Liverpool iyo Masar.
Mohamed Salah waxa uu sii waday saamayntiisa isaga oo haddaba 9 gool oo ay Liverpool ka dhalisay Premier League ka soo qayb qaatay waana 6 gool oo uu soo dhaliyay iyo 3 gool caawin taas oo haddii lagu daro gool dhalintiisii qaybtii labaad ee xili ciyaareedkii hore sare u qaadi lahayd sida uu ugu qalmo abaal marinta Ballon d”or.
Intii uu socday xili ciyaareedkii hore ee la soo dhaafay waxaa Mohamed Salah loo saadaalinayay in uu ku guulaysan karo abaal marinta Ballon d’Or isaga oo sidoo kale ku soo baxay saddexdii xidig ee ku tartamayay abaal marinihii xidiga Sanadka ee Yurub ugu fiican iyo waliba saddexdii xidig ee iskugu soo hadhay abaal marinta The Best.
Mohamed Salah ayaa la filayaa in uu ka mid noqon doono ciyaartyoda safka hore ka soo gali doono kala saraynta 30 ka musharax ee abaal marinta Ballon d’Or balse inkasta oo uu u qalmo abaal marintan haddna lama filayo in uu ku guulaysan doono.